'Askar yar' oo ka mid ah Ergooyinka Weyn ee Madowga Madowga ah iyo Aselsan Nano UAV | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara'Askarta yar-yar' ee Weftiyo Weyn Madowga Madowga ah iyo Aselsan Nano UAV
13 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
askarta yar ee howsha culus hornet madow iyo aselsan nano iha
ASELSAN waxay marki ugu horeysay daahfurtay qalabkeedii caqliga badnaa ee Nano Unmanned Aerial Vehicle (Nano-UAV) ee TEKNOFEST'19.
Nano-UAV, oo lagu dhex shaqeyn karo meelo furan oo xiran oo loogu talagalay dib u dhisidda, dabagalka iyo ujeedoyinka sirdoonka, ayaa ugu yaraan shan iyo labaatan daqiiqo hawada ku jiraya. Waxay kaloo awood u leedahay inay ku wareejiso sawirada waqtiga-dhabta ah ee adkaysi u leh isku xirka kuwa iskudarsan masaafo fog 1,5 kilomitir.
Sidoo kale waad ka shaqeyn kartaa daaqa
Shaqo kale oo iskiis u shaqeysa oo ah R&D ee ASELSAN waxaa loo qorsheeyay in lagu wareejiyo awoodaha laga helay Mashruuca Horrumarinta Herd UAV loona wareejinayo Nano-UAVs. Nano-UAV waxaa adeegsan kara qof keli ah, oo si fudud ayaa loogu dhex dari karaa baabuurta gaashaaman.
Nano-UAVs si fudud ayaa loogu dhex daraa culeyskooda hoose iyo cabbirkooda, way adagtahay in la garto mararka qaarna tan suurtagal ma ahan. Nidaamyada noocan oo kale ah waxaa doorbidaya xoogag khaas ah iyo ururo sirdoon oo loogu talagalay daba-galka iyo helitaanka bartilmaameedyada qiimaha sare leh
Nano-UAVs waa muhiim sababtoo ah waxay si deg deg ah u helaan iyo ilaalo meelaha fog fog inta lagu jiro dagaalka iyo howlgalka. UAV-yadaani, kuwaas oo, dabeecadooda, aan khatar u gelin diyaaradaha kale ama shaqaalaha, waxay bixiyaan fursad ay ku fuliyaan howlo adigoon u baahnayn isuduwidda hawada.
UAV-yadaas, oo bilaabi kara waqti aad u gaaban, waa kuwo aad u fudud in la isticmaalo. Nano-UAVs waxay bixiyaan faa iido qiimo leh oo muhiim ah maadaama ay dhaqaale ahaan leeyihiin. Aaladahaani waxay qaban karaan howlaha sida samatabbixinta, sahaminta meelaha xiran ama buuqsan, falanqaynta deegaanka ee caqabadaha waaweyn, aqoonsiga shay, ilaalo dhaw, baarista dambiyada.
Xulashada Ciidamada Aduunka Nano UAV: ​​Black Hornet
Nano UAV PD-100 Black Hornet, oo yar oo kufilan calaacasha, ayaa ka mid ah qalabka ay adeegsadaan Ciidamada Gaarka ah, oo ka mid ah cutubyada ugu quruxda badan ee TAF. PD-100 Black Hornet Nano UAV, oo ay adeegsadaan Taliska Ciidamada Gaarka ah iyo sidoo kale Taliska Amniga Gaarka ah ee Gendarmerie Commando (JÖAK), waxaa soo saaray shirkadda "Prox Dynamics". Sida lagu arkay muuqaalka, UAV, oo leh dhisme helicopter ah oo la yareeyay halkii ay ka ahayd qaab dhismeedka 4-rotor ah, ayaa wareejinaya sawirro toos ah inta lagu jiro duulimaadka oo leh kaameeraha hortiisa. Black Hornets si firfircoon ayaa loo isticmaalaa, maadaama ASELSAN Nano UAV aysan weli aha mid la soo saaray. Markii xalka maxalliga ah la sameeyo, waxaa la saadaalinayaa in loo adeegsan doono JÖAK iyo Ciidamada Gaarka ah.
Amarka Madoow ee Ciidanka Mareykanka
Nidaamyada FLIR Inc. Nidaamyada dib-u-dhisidda shaqsiyeed ee loo yaqaan 'Black Hornet 3 Reconnaissance Systems' (PRS) oo ay soo saarto Mareykanka ayaa si firfircoon loogu adeegsadaa ciidanka Mareykanka oo leh marxalado kala duwan. Nidaamka 'FLIR Systems' wuxuu ka helay $ 3 milyan oo doollar ciidankii Mareykanka ee loogu talagay Black Hornet 20,6. Shirkadda FLIR waxay gaarsiisay in kabadan 12.000 Black Hornet Nano-UAVs difaaca iyo ciidamada amaanka aduunka oo dhan.
"Re" oo ku yaal ciidamada Ingiriiska ee Black Hornet
Iyaga oo ka qaadaya marwada guriga sanadihii 2016 iyo 2017 alaabada, ciidamada Ingriiska waxay go’aansadeen inay dib u isticmaalaan Black Hornet UAVs iyo xitaa inay waxbadan iibsadaan. Ciidamada ingiriiska waxay u kala saaraan aaladaha maadada sida Nidaamka Dib uheshiisiinta Shakhsiyeed, oo ah Nidaamka Soosaarka Shakhsiyeed, waxayna xustay in UAVs ay tahay inay ka shaqeeyaan soddon koox si ay u helaan waxqabadka ugu sarreeya marka loo eego khibradda loo yaqaan 'STRIKE waayo-aragnimo'. Khibrada 'SHAQAALAHA' waa khibradda magaca geedi socodka ciidamada Ingriiska ay ku dhaqmayeen si ay u abuuraan "Shot Brigade" oo soconaya ilaa 2020. Goob-joogayaasha raacay geeddi-socodka 2018 ayaa xusey in dib-u-habeynta midowgii iyada oo aan Black Hornet wiiqayn kartida sahaminta ee aan maamul jirin. Ciidamada ingiriiska waxay bixin doonaan soddon sahay oo Black Hornet ah oo dhan $ 60,000 million guud ahaan, iyagoo bixin doona $ 1,8 aaladdii.
FLIR Black Hornet VRS | Nano UAV Waxa Laga Soo Saaray Gawaarida
Black Hornet VRS waxay ku qalabeyneysaa gawaadhi gaashaaman ama makaanik ah nidaam dib-u-dhisis oo iskiis u jira. Qeybta daahfurka oo leh kontaroolo si buuxda isugu dhafan gudaha gaariga waxaa banaanka yaallay ilaa afar gees oo gees ah Nano-UAVs waa lagu rakibi karaa. Sababtaas awgood, halka unugyada fulinaya waajibaadka ay yihiin kuwa ilaaliya gudaha gawaarida gaashaaman, waxay sidoo kale yareeyaan / ilaalinayaan awooda bini aadamka iyo ilaha looga baahan yahay inay ku urursadaan sirdoonka goobta dagaalka lagula jiro Nano-UAV-yada.
Nidaamyada aan duuliyaha lahayn waxay sii wadaan horumarkooda waxayna si dhaqso leh ugu daraan aagagga dagaalka. UAVs waxay u safri karaan masaafado dhaadheer, waxay bixiyaan faa'iidooyin culus oo ku saabsan korjoogteynta aag ballaaran, waxayna yeelan karaan aragti sahlan oo ballaaran oo xagga isgaadhsiinta ah. In kasta oo nidaamyadan ay yihiin awood xoog badan, haddana waxay dhameystir u noqon doonaan nidaamyadan sida baabuurta dhulka aan duuliyaha laheyn (ICA). Marka laga eego aragtidan, waxaa suurtagal ah in la yiraahdo mid ka mid ah sababaha horumarinta Black Hornet VRS waa mabda'a guud ee shaqada.
Waxaan aragnay in Black Hornet VRS la tijaabiyay iyada iyo THeMIS İKA, oo ay soo saartay Milrem Robotics oo si guul leh u shaqeyneysey in kabadan 300 saacadood oo si guul leh looga gudbey geedi socod tijaabo ah.
Macnaha guud, Nano-UAV wuxuu saadaalin karaa dariiqa bartilmaameedka ah ee gaadhiga dhulka isagoo abuuri kara qaab saddex-geesood ah oo dhulka ah, ka dibna gaariga aan duuliyaha lahayn wuxuu markaa qorsheyn karaa khariidad waddo oo faahfaahsan kana fogaanaya caqabadaha Nano-UAV ay u aragto una soo sheegto jihooyinkeeda. Waxay kale oo burburin kartaa hanjabaadaha lagala kulmi karo nidaamyada xakameynta fog ee qaabab kala duwan oo lagu daro.
Gawaarida ugu Casriga Yar ee Badda Madoow
Dareenka sarkaalka tareenka ayaa badbaadiyey nolosha wiil yar
Taariikhda ay furan tahay Telefishin-Masawir-yar-yar-yar-yar-yar-yar-yar ayaa lagu dhawaaqay